बाइबलका कथाहरू: यहोवाको उपासना गर्ने पाल - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
पाल छेउको सानो कोठालाई हेर त। त्यहाँ एउटा बाकस छ। यसलाई करारको सन्दुक भनिन्छ। सन्दुकको दुवैतिर सुनका एक-एक वटा स्वर्गदूत अर्थात् करूबहरू छन्। दस आज्ञा लेखिएको ढुंगाका दुई पाटी मोशाले फुटाइदिएको हुँदा परमेश्वरले ती आज्ञा फेरि अर्को दुई वटा पाटीमा लेखेर दिनुभयो। यी दुई पाटीलाई करारको सन्दुकभित्र राखिन्थ्यो। सन्दुकभित्र एउटा भाँडोमा मन्न पनि राखिन्थ्यो। मन्न के हो, तिमीलाई याद छ?
अब पालको ठूलो कोठालाई हेर त। यो कोठा, कुनाको सानो कोठाभन्दा दुई गुणा ठूलो छ। तिमीले राम्ररी हेऱ्यौ भने यो कोठाभित्र एउटा बाकस अथवा सानो सन्दुक अनि त्यसबाट धुवाँ निस्किरहेको देख्नेछौ। यो वेदी हो। पूजाहारीहरूले वेदीमा सुगन्धित धूप जलाउँथे। ठूलो कोठामा सात वटा बत्ती बाल्न मिल्ने पानस पनि छ। कोठामा एउटा टेबुल पनि छ। यो टेबुलमा १२ वटा रोटी राखिन्थ्यो।
चित्रमा देखाइएको पाललाई के भनिन्छ र त्यहाँ के गरिन्छ?
यहोवाले किन सजिलै अलग-अलग पार्न मिल्ने पाल बनाउन अह्राउनुभयो?
पालभित्र सानो कोठाको बाकसलाई के भनिन्छ र त्यो बाकसभित्र के छ?
यहोवाले कसलाई प्रधान पूजाहारी रोज्नुहुन्छ? प्रधान पूजाहारीले के गर्छ?
ठूलो कोठामा भएका तीनवटा सामानहरूको नाउँ बताऊ।
पालको आँगनमा के दुइटा कुरा छन् र यी सामानहरू के गर्न प्रयोग गरिन्छ?
प्रस्थान २५:८-४०; २६:१-३७; २७:१-८ र २८:१ पढ्नुहोस्।
“करारको सन्दूक[का]” करूबहरूले केको प्रतिनिधित्व गर्छ? (प्रस्थ. २५:२०, २२; गन्ती ७:८९; २ राजा १९:१५)
प्रस्थान ३०:१-१०, १७-२१; ३४:१, २ र हिब्रू ९:१-५ पढ्नुहोस्।
बासस्थानमा सेवा गर्ने पूजाहारीहरू शारीरिक तवरमा पनि सफा हुनुपर्ने आवश्यकतालाई यहोवाले कसरी जोड दिनुभयो र यसले आज हामीलाई पनि कसरी असर गर्नुपर्ने हो? (प्रस्थ. ३०:१८-२१; ४०:३०, ३१; हिब्रू १०:२२)
हिब्रू मसीहीहरूलाई पत्र लेख्दासम्ममा बासस्थान र व्यवस्था खारेज भइसकेको थियो भनेर पावलले कसरी प्रस्ट पाऱ्यो? (हिब्रू ९:१, ९; १०:१)